Degenaansho aan caga adag ku taagneen oo saaka laga dareemayo Baladweyne – SBC
Degenaansho aan caga adag ku taagneen oo saaka laga dareemayo Baladweyne
Posted by Webmaster on February 12, 2012 Comments
Xaalada Magaalada Baldweyne xarunta Gobolkaasi Hiiraan Gaar ahaan dhanka xaafada galbeed ee magaaladaas ayaa laga soo sheegayaa degenaansho aan caga buuran ku taagneen ka dib markii halkaasi ay shalay ka dheceen dagaalo dhexmaray maleeshiyaad halkaasi ku sugan iyo ciidamada Maamulka dooxada shabeele.
Inkastoo qeybaha kale ee magaalada ay ka jirto degenaansho hadana waxaan sidii la rabay u shaqeyneynin dhaq dhaqaaqa ganacsi iyo isku socodka dadweynaha iyo gaadiidka, inkastoo uu jiro ganacsi aan sidaasi u buurneyn.
Dad xog ogaal ah oo saaka lahadlay xafiiska SBC International ee magaalada Garoowe ayaa sheegay in labadii dhinac ee dagaalamay ay is horfadhiyaan, balse aan jirin dagaal soconaya ayna xaaladu u egtay mid aan caga buuran ku taagneen, maadaama ay labada dhinac is horfadhiyaan isuna jiraan masaafo aan sidaasi u kala fogeen.
Sagaalkii shalay ka dhacay Baladweyne ayaa waxaa ka dhashay khasaare badan oo dhimasho iyo dhawac leh, waxaa sida wararka ay xaqiijinayan ku geeriyooday dagaalkaasi ku dhowaad 12 qof oo ay ku jiraan dad rayid ah iyo labadii dhinac ee dagaalamayba, dhaawacuna u intaasi kabadanyahay.
Saraakiil ka tirsan Maamulka dooxada shabeele oo la hadlay xalay SBC ayaa sheegay in dagaalka ay soo qaadeen dhinaca kale ayna yihiin dad arka gixiso ah oo sida uu xusay mid ka mid ah saraakiisha maamulkaasi, waxaanu sheegay in ay kooxahaasi wataan magaca Amniyaad oo sida uu sheegay lagu yaqaan Xarakada mujaahidiinta Alshabaab.
Dhinaca kale mid ka mid ah Odayaasha beesha degta galbeedka baladweyne oo isna hadlay ayaa sheegay in lagu soo duulay ayna yihiin ciidanka ay la dagaalameen kuwo bililiqo doon ah, waxaanu ka saaray meesha eedeymaha loo soo jeediyay, waxaanu ku tilmaamay duulaankan mid ay ka dambeyso arimo qabiil waa sida uu hadalka u dhigaye.
Isku soo wada duub lama oga waxyaabaha ka dhalan karta dhacdooyinkan oo aysana aheyn markii ugu horeysay oo ay ciidamada DKMG ah ama dooxada shabeele kula dagaalamaan galbeedka magaaladaas kooxo maleeshiyaad ah.